တောရိုင်းကောင်တွေကိုရှင်းလင်းမယ့် " Monster Wolf" - JAPO Japanese News
ဟူး 18 Nov 2020, 8:43 မနက်
ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာ ဝက်ဝံတွေတစ်နေရာပြီးတစ်နေရာပေါ်လာပါတယ်။
Niigata စီရင်စု Shin-Hatsuda မြို့မှာ ဝက်ဝံတွေ့ရှိမှုအကြိမ်အရေအတွက်က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ယှဥ်ရင် ၆ ဆခန့်ပိုများနေတာကိုသိရပါတယ်။ နောက်ပြီး Ishikawa စီရင်စု Kaga မြို့မှာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နေ့ကမှ ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှာ ဝက်ဝံတစ်ကောင်ဝင်ရောက်သောင်းကျန်းသွားခဲ့ပါတယ်။
ဝက်ဝံတွေဟာ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့တောင်တွေမှာသာမက၊ လူတွေနေထိုင်တဲ့မြို့အထိပါ ဆင်းလာကြတယ်။
သူတို့က ယာခင်းတွေကိုဖျက်ဆီးရုံသာမက လူတွေကိုပါတိုက်ခိုက်လာကြပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်မှာ တီထွင်လိုက်တဲ့ ကိရိယာကတော့ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတော့တယ်။
အဲ့ဒါကတော့ “ Monster Wolf” ဆိုတဲ့ ဝက်ဝံတို့ရဲ့အာရုံကိုလှည့်စားမယ့် မွန်းစတားဝံပုလွေပါ…
ဒါကို Hokkaido မှာရှိတဲ့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ “ 太田精器” (Ota Seiki) ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကတီထွင်ခဲ့ပြီး၊ ထိုမွန်းစတားဝံပုလွေဟာ ၁၂၀ စင်တီမီတာရှည်လျားကာ၊ အကျယ် ၇၅ စင်တီမီတာနဲ့ အမြင့် ၇၀ စင်တီမီတာရှိပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ဒီ “ Monster Wolf” တွေကိုမြောက်ဘက် ဟိုကိုင်းဒိုးကနေ တောင်ဘက်အိုကီနာဝါကျွန်းအထိ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ နေရာ ၆၀ ခန့်မှာတပ်ဆင်ထားပြီးပါပြီ။
ဒီ “ Monster Wolf” ကတော့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေချဥ်းကပ်လာတဲ့အခါ ၎င်းအောက်ခြေရှိ ရောင်ခြည်နဲ့အာရုံခံနိုင်ပါတယ်။
မျက်စိမှာ LED မီးကလည်းရဲရဲတောက်နေပြီး၊ ခေါင်းလည်းလှုပ်ယမ်းကာ တကယ့်ဝံပုလွေတစ်ကောင်ကဲ့သို့ ခြိမ်းခြောက်တဲ့အသံမျိုးကိုလည်းထုတ်နိုင်ပါသေးတယ်။
သူ့အထဲမှာ လူအသံနဲ့သေနတ်သံလို ခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါင်း ၆၀ လောက်ပါဝင်ပါတယ်။
တစ်ခုရှိတာက ကြေငြာပေးတာကိုလည်း လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်…
နေ့အချိန်မှ အသံလမ်းညွှန်စနစ်ဖြစ်ပြီး ညအချိန်မှာတော့ ခြောက်လန့်စေတဲ့စနစ်အဖြစ်တီထွင်ထားပါတယ်။
ဒါနဲ့ ထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ “ 太田精器” (Ota Seiki) ရဲ့ဥက္ကဌဖြစ်သူ Mr. Yuji Ota ကို ဘာကြောင့် ဝံပုလွေဖန်တီးဖို့ဆုံးဖြတ်ရသလဲ? ဆိုတဲ့အရာပေါ်မေးကြည့်တဲ့အခါ….
သတ္တဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးလေ့လာတွေ့ရှိချက်က တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့သဘာဝရန်သူဟာ ဝံပုလွေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် “ Monster Wolf” ဖန်တီးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ Mr. Yuji Ota ကပြောခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်ဆိုတာဟာ ဒီလိုတီထွင်ဖန်တီးမှုပေါင်းများစွာနဲ့ ထူးဆန်းတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်…..
Niigata ခရိုင်မှာ ဝက်ဝံတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် “ ဝက်ဝံသတိပေးချက်” ထုတ်ပြန်ထားလျှက်ရှိ !!!